Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "muroyi", asi shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "muroyi", asi shamwari manzwiro?
3500 Yen kune zvinoreva
nyanzvi kufembera kuti "muroyi" neizvi nzvimbo n'anga akanga akapfeka nzira
kuti zvinhu zvokupfeka usununguke yokunyatsoongorora ndiko, ina munondo-sengere Cup mari iri chin'ai uye vanokweverwa pamwechete. The panhongonya pamusoro n'anga varipo chiratidzo ∞, kurutivi rworudyi kudenga, kubva pakaita yauri vachikorovhera moto, mvura, mhepo, nyika okunze, mano uye haaperi pangave pedyo naMwari, kana " rave zvichishandurwa serinomiririra Kunyepa '.
nguo chena muroyi manzwiro wakachena, bhachi dzvuku rinotarisirwa maitiro, Roses uye maruva vari kupayona mweya, sezvo bhandi raiva nyoka iri muchimiro kuti rinomiririra zvido, n'anga yacho kadhi iri itsva zviri zvakare kumiririra mamiriro uye kutanga.
zvinorehwa zvakanaka nzvimbo manzwiro
muroyi ari munhu iwe muroyi zvakanaka nzvimbo zvinofanirwa kureva, kutanga uye mavambo, tarenda, kugona, mukana, pfungwa, rinomiririra zvakadai kuziva iwe. Sezvo zvakanaka chinzvimbo n'anga achava hazvirevi kuti zvakakosha kuramba kuita nesimba uye zvisinei manzwiro itsva, nyaya vaviri ndinofunga vanhu, mumwe bato hauna akabatwa akanaka chaizvo ukama newe , riri rehurumende kuitwawo kutongwa uye kukanganisa zvakawanda vanhu vaviri ukama kunokura.
edza changing kunokuita kudanana kosi mune tsika, Toka vanoda rikusvikirei, kana kuti chipo, ndinofarira ndichifunga kuti semi kufara nguva. Sezvo anokumhan'arira ndiyewo Zvichida uri kufunga zvokuroorana nemi kutaura zvakawanda, iwe aizova good'll kunakirwa yakanaka nguva nevamwe bato. Kana vanhu
rusina kukwana mberi rudo rumwe bato kuziva kuti kwenyu vamwe, ndiye mamiriro umo kuvaviwa. Nokuti kufunga kana chandingaita kuvhara nemi, ungada kutaura kubva mirayiridzo pako. Rimwe bato Zvakanakawo pfungwa kuzvibata mutariro kuziva iwe.
sherekete Kana anokumhan'arira manzwiro
muroyi ari neizvi nzvimbo kadhi iri neizvi nzvimbo zvinofanirwa kureva ari, mumwe bato rinomiririra hurumende kuti uri paranoia kuzorwa newe. Havagoni kuvimba zvinhu zvenyu, isu kunetseka nezveramangwana newe. Kana vaviri ndinofunga vanhu, mumwe bato haigoni kuvimba nemi, ndinofunga kuti Utomashiku ukama newe. Sezvo nyaya
yakaipisisa iri vakafunga kuti kuda murambane newe, iwe zvingava nani kurega kuita kwakakasharara. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo, chero bedzi n'anga akasvika pakatarisana nzvimbo, iwe kumiririra chokwadi kuti hauna panguva kufarira zvose. Kure chido kwamuri, nekuti zvinokwanisika kuti kunyange chivimbo, zvingava nani kuti kutsvaka mumwe mupikisi.